Nibahan-Toerana Indray Andro Tamin’ny Gazety Danoà Mpivoaka Isan’andro Ny Mpitsoa-ponenana Hizara Ny Tantaran’izy Ireo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Oktobra 2015 9:38 GMT
Vakio amin'ny teny polski, Italiano, Français, Español, русский, English
Lahatsoratra voalohany nosorotan'i Lawja Jawad Mohammadi, izay nandao an'i Iragi Kiordistan ary tonga tao Danemarika tamin'ny taona 2002, niasa niaraka tamin'ny fikambanam-behivavy izy tany Iraka, foibem-[pamahana] krizy ho an'ny vehivavy, ary mpanao gazety tao amin'ny Yeksani (Fahalalahana). Mikasika ny zava-mitranga amin'ny vehivavy ilaozan'ny lehilahy ny lahatsorany tamin'izany.
Ao Copenhagen, navelan'ny gazety Danoà mpivoaka isan'andro Information nameno ny pejy manontolo miisa 48 tamin'ny Zoma 9 Oktobra ireo mpitsoa-ponenana 12, vao tonga vao haingana ny sasany, ary mpanao gazety matihanina avokoa izy rehetra.
Nanazava tamin'ny antsafa niarahana tamin'ny Guardian tamin'ny 9 Oktobra i Lotte Folke Kaarsholm, tonian-dahatsoratra ao amin'ny Information:
Saika mpitsoa-ponenana no tena anton-dresatsika eto Danemarika tao anatin'izay andro vitsivitsy izay, […] Nihevitra izahay fa hangina ary hamela ireo mpitsoa-ponenana hametraka ny fotoana. Hafa tanteraka amin'ny zavatra resahin'ny mpanao politika ny vokatra azonay.
Nizara ity hetsika ity tao amin'ny pejy Facebook-ny ny gazety, anisan'izany ny dingana voalohany tamin'ny fitadiavana mpanao gazety vahiny. Tsy tonga tonga ho azy ny hevitra fa nateraky ny fahamaroan'ireo fisantaran andraikitra hafa ataon'ireo olom-pirenena miezaka manome lanja sy fijery samihafa kokoa mikasika ny toe-javatra iainan'ny mpitsoa-ponenana.
Ny fihetsik'i Danemarika manoloana ny firohotry ny mpitsoa-ponenana
Tao anatin'ny fandaharan'asa nandritra ny taona maro ny adihevitra mpitsoa-ponenana sy ny fitantanana azy ao Danemark. Na dia izany aza, nandritra ny fiandohan'ny volana Septambra, niaina firohotan'ny mpitsoa-ponenana marobe, araka ny hita any amin'ny faritra hafa ao Eoropa i Danemarika, ka nampitombo ny fifandroritan'ny adihevitra ao Danemarika izany.
Tohanan'ny Antokom-Bahoaka Danoà ny governemanta liberaly vitsy an'isa, izay tonga teo amin'ny fahefana tamin'ny volana Jona 2015. Niteraka fiovana ho an'ny politikan'ny ankavanana henjana kokoa momba ny mpitsoa-ponenana sy ny mpifindra monina izany. Tamin'ny volana Septambra, nametraka dokambarotra tamin'ny gazety Libaney mampitandrina ny mpitsoa-ponenana mankany Danemarika ny fitondrana Danoà. Mahatsikaiky, nifanojo tamin'ny iray tamin'ireo firohotan'ny mpitsoa-ponenana marobe tao anatin'ny folo taona ny famoahana ireo dokambarotra.
Voatsikera noho ny tsy fandraisana fepetra mandaitra sy azo anorenana mba hanomezana toe-piainana ho an'ny mpitsoa-ponenana ny fitondram-panjakana Danoà, ary nirongatra ny hetsika marobe tarihin'ny olom-pirenena handraisana ireo mpitsoa-ponenana ho setrin'ny tsy fihetsehan'ny governemanta. Ankoatry ny hafa, namokatra dokambarotra nanaovana fanangonam-bola hanoherana ny fihetsika (fihetsiky ny governemanta) ny vondrona iray antsoina hoe “Olom-pirenena Manatratra” mba handraisana ny mpitsoa-ponenana sy miala tsiny amin'ny anaran'ny vahoaka Danoà. Tamin'ny 27 Septambra, nikarakara hetsika fanangonana ireo fisantarana andraikitra tarihin'ny olom-pirenena miasa manohana ny mpitsoa-ponenana ny vondrona iray hafa “Forsamlingen” (ny Antenimiera).
Nametraka fangatahana fitsipika henjana amin'ny fahazoana zom-pirenena ny governemanta tamin'ny herinandro lasa, ary nampihena ny fanohanana ara-bola ary ara-pitaovana ho an'ny mpitsoa-ponenana.
Manome feo ho an'ireo tsy re
Gazety Eoropeana maromaro no nampiditra ny mpitsoa-ponenana sy ny tantarany tao amin'ny pejin'izy ireo, saingy miavaka ny fisantarana andraikitry ny Danoà amin'ny famelana ny mpitsoa-ponenana ihany no manoratra ny teny tsirairay. Tsara avokoa ireo fanehoan-kevitra, ary haino aman-jery iraisam-pirenena marobe no naka ny fisantarana andraikitry ny gazety mpivoaka isan'andro Danoà, anisan'izany ny Huffington Post sy ny Guardian.
Nisioka ny solombavambahoaka Danoà Uffe Elbæk:
Fiderana makotroka ho an'ny @informeren izay nanokana ny takelaka sy ny matoan-dahatsoratra ho an'ny vondrona mpitsoa-ponenana #dkpol
Nidera ny fandraisana andraikitra ihany koa ilay mpanolotra fandaharana amin'ny Radio Anders Stegger :
Raha mividy gazety iray ihany ianao amin'ity taona ity, dia mividiana gazety Information androany. Mpitsoa-ponenana ihany no nanoratra ary tena mahaliana @informeren.
Betsaka ny olona gaga, raha nidera ny fanapahan-kevitra feno herim-po momba ny lahatsoratra ka nanoro hevitra ny olona mba hividy ny gazety i Lars Hedegaard, tonian-dahatsoratra teo aloha tao amin'ny gazety – ary lasa malaza taty aoriana noho izy mpitsikera ny silamo sy voaheloka tamin'ny fanehoan-kevitra feno fankahalana tamin'ny 2011. Tamin'ny antsafa tamin'ny onjam-peo Radio24syv, nanadihady ny lohahevitra i Hedegaard ary nilaza fa hevitra tsara ny famoahana ny lahatsoratra satria mety hampivoatra ny adihevitra momba ny mahazo ny mpitsoa-ponenana izany.
Nanazava ny safidin'izy ireo ny lehiben'ny tonian-dahatsoratra Christian Jensen sy ny tale mpitantana Mette Davidsen-Nielsen:
Marobe izy ireo (ny mpitsoa-ponenana) raha ny antontan'isa no jerena, ary mijanona amin'ny adihevitra ara-politika izy ireo, izay matetika tsy maha-tompontrano azy ireo. Miresaka mpitsoa-ponenana isika rehetra saingy androany dia miresaka amintsika ny mpitsoa-ponenana.
Samy manana ny tantarany, ny anjarany, ny asany sy ny nofinofin'izy ireo amin'ny ho avy ny tsirairay sy ny rehetra amin'izy ireo. Saingy zara raha mandre azy ireo isika ary tena mahalana.